Cheater ကိုဘယ်လိုဖမ်းရမလဲ - ၁၀ ဆဲလ်ဖုန်း Spy Apps & Tricks
နေအိမ် အဆိုပါ Cheater ကိုဖမ်း လိမ်လည်သူများကိုဘယ်လိုဖမ်းရမလဲ - ဆဲလ်ဖုန်းအက်ပလီကေးရှင်း ၁၀ ခု
လိမ်လည်သူတွေကိုဘယ်လိုဖမ်းရမလဲသိလား။ အွန်လိုင်းရရှိနိုင်သည့်ရှုပ်ထွေးသောသူလျှို app များ၏အကူအညီဖြင့်လိမ်လည်သူများကိုထောက်လှမ်းရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ အဆင့်မြင့်သူလျှို app ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သူနောက်ကိုမလိုက်ဘဲလိမ်လည်သူကိုအလွယ်တကူခြေရာခံနိုင်သည်။
ဒီအဆင့်မြင့်သူလျှို app ရဲ့အကူအညီနဲ့လူတွေကတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်း၊ စာသားမက်ဆေ့ခ်ျတွေကိုဖျက်ပြီးဒါမှမဟုတ်သူတို့နာမည်ကို alias အောက်မှာသိမ်းထားရင်တောင်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့လိမ်လည်မှုလက္ခဏာတွေကိုအလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ cheat partner ကိုဖမ်းနိုင်သည့်အထိရောက်ဆုံးနှင့်ရှုပ်ထွေးသောသူလျှိုဖြေရှင်းနည်းများကိုရှာဖွေကြပါစို့။
အပိုင်း ၁: cheater ကိုဖမ်းရန်
၁.၁ Minspy: လိမ်လည်သူများကိုဖမ်းရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသူလျှို App
၁.၂ iPhone တွင်လိမ်လည်သူများကိုဘယ်လိုဖမ်းရမလဲ
၁.၃ Android တွင်လိမ်လည်သူများကိုမည်သို့ဖမ်းဆီးနိုင်သည်
အပိုင်း ၂: လိမ်လည်လှည့်ဖင့်အိမ်ထောင်ဖက်ကိုဘယ်လိုဖမ်းရမလဲ
အပိုင်း ၃: အွန်လိုင်းခိုးစားသူများကိုဘယ်လိုဖမ်းရမလဲ
အပိုင်း ၄: Cheater ကိုအခမဲ့ဖမ်းရန်
အပိုင်း ၅: လိမ်လည်သူများကိုအွန်လိုင်းတွင်အခမဲ့ဖမ်းယူနည်း
အပိုင်း 6: လိမ်လည်သူများကိုဖမ်းရန်အွန်လိုင်းသိကောင်းစရာများ
အကယ်၍ သင်၏လိမ်လည်လှည့်စားသူကိုဖမ်းချင်ရင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအဆင့်မြင့်သူလျှို app ၏အကူအညီဖြင့်ပစ်မှတ်၏စမတ်ဖုန်းကိုစူးစမ်းလေ့လာရပါလိမ့်မည်။ သူလျှိုအက်ပ်ကို အသုံးပြု၍ SMS၊ ခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းများ၊ တည်နေရာ၊ browsing history၊ အီးမေးလ်နှင့်အခြားလူမှုမီဒီယာအကောင့်များကိုလျှို့ဝှက်နံပါတ်ဖြင့်လျှို့ဝှက်စွာရယူနိုင်သည်။
ဝေးလံခေါင်သီသောဓါတ်ပုံများကိုပင်သင်ရိုက်နိုင်သည်။ ဒီ spy app ကသင်ပစ်မှတ်တက်ဘလက်ဒါမှမဟုတ်ဆဲလ်ဖုန်းရဲ့လုပ်ဆောင်မှုကိုအလွယ်တကူစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Minspy လူကြိုက်များပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်သူလျှို app ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိစိတ်ကျေနပ်မှုရှိသောဖောက်သည်အမြောက်အများကယုံကြည်ရသောယုံကြည်စိတ်ချရပြီးလုံခြုံစိတ်ချရသောဆုံးသော app တစ်ခုဖြစ်သည်။
Minspy တွင်အဆင့်မြင့်အင်္ဂါရပ်များရှိပြီးလိမ်လည်သူများကိုဖော်ထုတ်နိုင်သည်။ လူသိများပြီးမီဒီယာကြီးများက Minspy ကိုထောက်ခံကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သုံးစွဲသူ၏စိတ်ကျေနပ်မှုနှုန်းသည် ၉၆၁TP1T ထက်ပိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Minspy တွင်အဆင့်မြင့်ဆဲလ်ဖုန်းစောင့်ကြည့်ခြင်းအင်္ဂါရပ်များပါရှိသော်လည်း interface သည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။ အက်ပ်ကိုတည်ဆောက်ပြီးစီးချိန်တွင်ပစ်မှတ်ထားသည့်ကိရိယာပေါ်ရှိလုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကိုထိန်းချုပ်နေရာမှတဆင့်စစ်ဆေးနိုင်သည်။
Minspy သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအခြေခံနှင့်အခြေခံစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းလက္ခဏာများဖြစ်သည်။ ခေါ်ဆိုမှုမှတ်တမ်းများကိုရှာဖွေခြင်း၊ လူမှုမီဒီယာလှုပ်ရှားမှုများကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ စာတိုပေးပို့ချက်များနှင့်ဓာတ်ပုံများ / ဗွီဒီယိုများကြည့်ခြင်းများအပြင်သင်ပစ်မှတ်ထားသည့်ကိရိယာပေါ်ရှိပြက္ခဒိန်များနှင့်မှတ်စုများကိုလည်းစစ်ဆေးနိုင်သည်။
အရေးအကြီးဆုံးကတော့ Minspy app သည်ပစ်မှတ်ထားသည့် GPS တည်နေရာကိုခြေရာခံနိုင်သည်။ Geofences ကို သတ်မှတ်၍ အချို့သောareasရိယာများမှထွက်ခွာခြင်းသို့မဟုတ် ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ အခြား standout feature များမှာကိုယ်ပျောက်နည်းပညာ၊ SIM Card သတိပေးချက်များ၊ တပ်ဆင်ထားသည့် application များ၏ display, keylogger နှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည်။
ဤလျှောက်လွှာသည်အလွန်လုံခြုံစိတ်ချရပြီးပေါ့ပါးသည်။ ၎င်းသည်ပစ်မှတ်ကိရိယာတွင်နေရာနှင့်ဘက်ထရီအနည်းငယ်သာလိုအပ်သည်။ အကောင်းဆုံးအပိုင်းကတိတ်တဆိတ်အလုပ်လုပ်တယ်။
iOS ကိရိယာများအတွက် Minspy ကထောက်ပံ့ပေးတယ် IOS ကို Minspy ဖြေရှင်းချက် ၎င်းသည်အလွန်ရိုးရှင်း။ လုံခြုံပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။
ဒီအက်ပလီကေးရှင်းရဲ့အကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်ကတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ်မှတ်စက်ကိုသင်ဘယ်တော့မှမလိုအပ်ပါဘူး target device ကို jailbreaking သို့မဟုတ် rooting မလုပ်ပဲ target iPhone ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကိုလေ့လာပြီးရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ ၄ င်းသည် target device ကို malware နှင့်ဆိုက်ဘာရာဇ ၀ တ်သားများမှကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။
iOS Minspy monitoring solution ကိုအသုံးပြုမှသာတစ်စုံတစ်ယောက်သည် iCloud အထောက်အထားများမှတဆင့် target device ကိုကြည့်ရှုနိုင်ကြောင်းသိရတာအံ့သြစရာပါပဲ။ ပစ်မှတ်ထားသည့်စက်ပစ္စည်းကိုရယူရန်သင်ရွေးချယ်သော web browser တစ်ခုလိုအပ်လိမ့်မည်။ iOS Minspy solution သည် web based solution ဖြစ်သည်။
အဲ့ဒါကြောင့် target iPhone ကိုအဝေးကနေ configure လုပ်နိုင်ပါတယ်။ တိကျသောနှင့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာများကိုပစ်မှတ်ထားသည့်စက်ပစ္စည်းအားအပြည့်အ ၀ ရယူသုံးစွဲနိုင်ရန်အတွက်အောင်မြင်စွာပေါင်းစပ်လိုက်ခြင်းသည်၎င်းကိုပြိုင်ဆိုင်မှုရှိသောဆော့ဖ်ဝဲများနှင့်ကွဲပြားသည်။ Minspy iOS solution သည် iOS version အားလုံးနီးပါးနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။
iOS Minspy ဖြေရှင်းချက်ကိုမည်သည့်နေရာမှမဆိုအွန်လိုင်းသုံးနိုင်သည်။ ပထမ ဦး စွာ၊ သင်သတ်မှတ်ထားသည့်စက်၏ပုံသဏ္forာန်အတွက် Setup Wizard ကိုဝင်ရောက်ရန်သင်၏အကောင့်ကို ဖန်တီး၍ မှတ်ပုံတင်ရမည်။
၎င်းအတွက်သင် target device account ၏ iCloud အထောက်အထားများကိုသာလိုအပ်သည်။ Minspy သည် iCloud အထောက်အထားများကို အသုံးပြု၍ target device ၏အချက်အလက်များကိုရယူလိမ့်မည်။
စည်းညှိပြီးနောက်သင်ရွေးချယ်သော Minspy dashboard ပေါ်ရှိဒေတာများကိုရယူနိုင်သည်။ အချက်အလက်များကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခြင်းပြုလုပ်ပြီးသောအခါသင့်အားအသစ်သောဒေတာများကိုပေးအပ်ရန်အချိန်ကာလတစ်ခုကြာပြီးနောက်အလိုအလျောက်စတင်သည်ကိုသတိပြုပါ။
ပစ်မှတ်များအတွက် Minspy ထားရန် iOS ထုတ်ကုန်အောက်ပါအဆင့်များကိုသာလိုက်နာပါ။
အဆင့် ၁: Minspy မှတ်ပုံတင်စာမျက်နှာသို့သွားပါ။ စာရင်း သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိသည့်အထုပ်ကိုဝယ်ယူခြင်းအားဖြင့် Minspy အကောင့်တစ်ခုအတွက်မှတ်ပုံတင်ပါ။
အဆင့် ၂: ပစ်မှတ်စက်ပစ္စည်းပြင်ဆင်မှုအတွက်အချိန်ဖြစ်သည်။ ပစ်မှတ်ထားစက်ပေါ်တွင်သတ်မှတ်ထားသည့်အကောင့်၏ iCloud အထောက်အထားများကိုရှာပြီး iCloud အထောက်အထားများကိုထပ်မံရိုက်ထည့်ပါ။ အချက်အလက်များကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်ချက်ချင်းစည်းညှိလိမ့်မည်။
အဆင့် ၃: ကျားမသူကိုစကြည့်ပါ။ ယခုရွေးချယ်ထားသော web browser ပေါ်ရှိ target device ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုအသံတိတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
Control Panel ထဲသို့ ဝင်၍ Dashboard သို့သွားပါ။ ယခုဆိုလျှင်သင်သည်လူမှုမီဒီယာလှုပ်ရှားမှုကို 'Social Media Applications' အပိုင်းတွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ထိုနည်းတူစွာသင်သည် iMessages နှင့်အခြားအချက်အလက်များကိုအလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်သည်။
သင့်ကိုအထူးအကြံပြုလိုပါတယ် Minspy ကိုသရုပ်ပြပါ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒါကိုမရွေးခင်ဒီ app ကိုစူးစမ်းဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပဲ။ ဒီသရုပ်ပြကိုအသုံးပြုတဲ့အခါဘာမှပြုပြင်စရာမလိုပါဘူး။
ပစ်မှတ်ထားသုံးစွဲသူသည် Android ကိရိယာကိုအသုံးပြုနေပါက၎င်းတို့စက်ကို အသုံးပြု၍ သင်စူးစမ်းနိုင်သည် Minspy Android ခြေရာခံဖြေရှင်းချက်။ Android ထုတ်ကုန်များကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်အတွက် app အများစုသည်သင့်အားအရေးကြီးသောထောက်လှမ်းရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များအားခြေရာခံရန်၎င်းကို root လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
Minspy သည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ ၎င်းသည်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာအင်္ဂါရပ်များဖြင့်တင်ဆောင်ထားပြီးပစ်မှတ်စက်၏လုပ်ဆောင်မှုကို rooting မပါဘဲကြည့်ရှုနိုင်ပြီးခြေရာခံနိုင်သည်။ ဒါအံ့သြစရာမဟုတ်လား
Minspy ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ပစ်မှတ်ထားသောစက်ပစ္စည်း၏လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကို rooting မလုပ်ပဲစောင့်ကြည့်နိုင်သည်။ Minspy သည်ဗားရှင်း ၄.၀ နှင့်အထက်ရှိ Android ကိရိယာအားလုံးနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။
ဤဖြေရှင်းချက်သည်အလွန်လွယ်ကူပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးပစ်မှတ်ထားသည့်စက်ကို root လုပ်စရာမလိုပါ။ သို့သော်တစ်ကြိမ်မှာ target device မှရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ access သည် Minspy application ကို install လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်ပစ်မှတ်ထားသည့်ကိရိယာကိုထည့်သွင်းတပ်ဆင်ပြီးပါက၎င်းကိုနောက်တဖန်မလိုအပ်တော့ပါ။
ယခုသင်သည်သင်၏ Minspy control panel မှရွေးချယ်ထားသော web browser မှတဆင့် target device ၏လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကိုအဝေးမှလျှို့ဝှက်စွာစောင့်ကြည့်နိုင်သည်။ နောက်ထပ်အချက်တစ်ခု - သင်သည်သင်၏ထိန်းချုပ်နေရာမှမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအဝေးထိန်းကိရိယာမှပစ်မှတ်ကိရိယာမှအဝေးမှပယ်ဖျက်နိုင်သည်။
built-in ကိုယ်ပျောက်နည်းပညာအင်္ဂါရပ်သည် Minspy application အိုင်ကွန်ကိုဖုံးကွယ်ထားပြီးပစ်မှတ်စက်ပေါ်ရှိနောက်ကွယ်တွင်ဆက်လက်အလုပ်လုပ်နေသဖြင့်လုံခြုံမှုနှင့်လုံခြုံမှုကိုပေးသည်။
Minspy ကို Android ဖုန်းမှာဘယ်လိုတပ်ဆင်မလဲ။ Minspy Android tracking solution ကိုတည်ဆောက်ရန်အချိန်အနည်းငယ်သာကြာလိမ့်မည်။ အောက်ပါအဆင့်များကိုသာလိုက်နာပါ။
အဆင့် ၁: ပထမ ဦး စွာ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ Minspy အကောင့်.
အဆင့် ၂: Minspy အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ရန်ပစ်မှတ်ထားသည့် Android ကိရိယာကိုတစ်ကြိမ်သာရယူပါ။ တပ်ဆင်နေစဉ် app မှတောင်းဆိုသောခွင့်ပြုချက်အားလုံးကိုခွင့်ပြုရန်မမေ့ပါနှင့်။
အဆင့် ၃: ယခုသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာကိုရွေးချယ်ပြီးပစ်မှတ်ထားသည့်စက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိလုပ်ဆောင်မှုကိုအဝေးမှကြည့်ရှုရန်သင်၏ Minspy Control Panel သို့ဝင်ရောက်ပါ။
အံ့သြစရာအကောင်းဆုံးကတော့ဘယ်သူ့ကိုမှပစ်မှတ်ထားစက်မှာသင့်ကိုမတွေ့နိုင်တာပါပဲ။ သူလျှိုလုပ်နေစဉ်မှာလိမ်လည်သူတွေကသင့်ကိုအချိန်မရွေးဖမ်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ထို့ကြောင့်၊ ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်လုံခြုံစိတ်ချရသောရာခိုင်နှုန်းရာခိုင်နှုန်းကာကွယ်ထားသော spy app တစ်ခုလိုအပ်သည်။
Minspy application သည်ရည်မှန်းထားသောစက်ပေါ်တွင်တိတ်တဆိတ်အလုပ်လုပ်သည်။ Minspy သည်2MB နေရာသာယူသောကြောင့်၎င်းသည်ပစ်မှတ်ထားသည့်စက်ပစ္စည်းရှိအခြားအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်အနှောင့်အယှက်မရှိပါ။ Minspy သည်သုညဘတ္ထရီနီးပါးစားသောကြောင့်ပစ်မှတ်ထားသည့်ကိရိယာသည်ဘယ်တော့မှအပူမပေးပါ။
ထို့ကြောင့်ပစ်မှတ်စက်သည်ဤလျှောက်လွှာကြောင့်ထိခိုက်ခြင်းမရှိပါ။ ဒါဟာကိုယ်ပျောက် mode မှာအလုပ်လုပ်တယ်။
၎င်းသည်ဝေးလံခေါင်ဖျားသောလိမ်လည်လှည့်ဖျားနေသောသူကိုဖမ်းရန်ခက်ခဲသည်။ သို့သော်သူလျှိုအက်ပလီကေးရှင်းများစွာကို၎င်းတို့မသိဘဲပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအပလီကေးရှင်း၏အကူအညီဖြင့်သင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုအဝေးမှကြည့်ရှုနိုင်ပြီး၎င်းတို့၏စက်ပစ္စည်းအချက်အလက်များကိုလည်းရယူနိုင်သည်။
Sပျဉ်းမနား အလွန်လူကြိုက်များတယ်လီဖုန်းစောင့်ကြည့်ဖြေရှင်းချက်သည်။ သန်းနှင့်ချီသောကျေနပ်ရောင့်ရဲသောသုံးစွဲသူများသည်၎င်းကိုကမ္ဘာအနှံ့အသုံးပြုကြသည်။ ဤလျှောက်လွှာ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များမှာ -
jailbreaking နှင့် rooting မလိုအပ်ပါ
keylogger၊ stealth နည်းပညာစသည့်အဆင့်မြင့်စွမ်းဆောင်ချက်များပါ ၀ င်သည်။
24 *7ဖောက်သည်အထောက်အပံ့ကိုရည်စူး
သူလျှို သည်ပစ်မှတ်၏ဆဲလ်ဖုန်းမှဖုန်းမက်ဆေ့ခ်ျများကိုခြေရာခံရန်လူကြိုက်များသောအွန်လိုင်းဖုန်းသူလျှို app တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်ဖုန်းအသုံးပြုသူအများစုသည်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများမှတဆင့်ဆက်သွယ်ကြပြီးထို SMS သည်ထိုသူနှင့် ပတ်သက်၍ အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များစွာကိုဖော်ပြသည်။
လူမှုမီဒီယာအကောင့်များနှင့်ရည်ရွယ်ထားသူ၏အီးမေးလ်များမှစကားဝှက်များနှင့်အသုံးပြုသူ ID ကို crack နိုင်သည့်မက်ဆေ့ခ်ျများမှသင် OTPs ကိုရနိုင်သည်။
WeChat နှင့် WhatsApp ကဲ့သို့သောလူမှုရေးနှင့်လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေးပလက်ဖောင်းများတိုးများလာခြင်းနှင့်အတူ၊ SMS အသုံးပြုမှုသည်ခေတ်နောက်ကျနေပြီ။ သို့သော် Spyier သည်လူမှုမီဒီယာ application များကိုလွယ်ကူစွာစောင့်ကြည့်နိုင်သည်။
သင့်ရှာဖွေမှုပြီးဆုံးသွားပြီ Zosearch: အကျိုးအရှိဆုံး reverse ဖုန်းရှာဖွေမှု။ ၎င်းသည်ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောဆိုဒ်တစ်ခုသာမကအသုံးပြုသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုလည်းအထိခိုက်မခံပါ။ သင်၏ဝိသေသလက္ခဏာ Zosearch နှင့်လျှို့ဝှက်ထားဆဲဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ကျေနပ်မှုရှိသောသုံးစွဲသူတစ်သန်းကျော်သည် Zosearch ကိုအသုံးပြုကြသည်။
Zosearch သည်ဖုန်းပြန်ပို့ခြင်းဖြင့်ရည်ရွယ်ထားသူမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြရုံသာမကရာဇ ၀ တ်မှုသမိုင်းနှင့်လူမှုမီဒီယာအကောင့်များလည်းပါ ၀ င်သည်။ အခမဲ့ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတွင်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိသည်။
နင် target device လုပ်ဆောင်မှုကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အဆင့်မြင့်ပြီးလူကြိုက်များသောသူလျှိုဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Cocospy တွင် con အနုပညာရှင်များအပေါ်သင်စူးစမ်းလိုသည့်အရာအားလုံးကိုခြေရာခံနိုင်မည့်ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ် ၃၀ ကျော်ပါရှိသည်။
အချို့ကတည်နေရာများကိုခြေရာခံသည်၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကိုစူးစမ်းသည်၊ စာများစစ်ဆေးသည်၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်မီဒီယာဖိုင်များကိုကြည့်ရှုသည်
စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အင်္ဂါရပ်များအရ Cocospy သည်အကောင်းဆုံးထောက်လှမ်းရေးစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ iOS နှင့် Android ဗားရှင်းနှစ်မျိုးလုံးကို Cocospy ဖြေရှင်းချက်အတွက်ရရှိနိုင်သည်။ Android ဗားရှင်း ၄.၀ သို့မဟုတ်အထက်ဖြစ်ရမည်။ iOS အတွက်မူဗားရှင်းအားလုံးကိုထောက်ခံသည်။
ဒါပေမယ့်ဘာကြောင့် Cocospy? ၎င်းသည်လုံခြုံစိတ်ချရပြီးယုံကြည်စိတ်ချရပြီးကမ္ဘာအနှံ့ရှိအဓိကသတင်းမီဒီယာများကထောက်ပံ့သည်။ သုံးစွဲသူသန်းပေါင်းများစွာသည်၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုနိုင်ငံပေါင်း ၁၉၀ ကျော်တွင်အလွန်ကျေနပ်အားရကြသည်။
အသုံးပြုသူမျက်နှာပြင်သည်ရိုးရှင်းပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။ လျှောက်လွှာကိုထည့်သွင်းတပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။ Jailbreaking နှင့် rooting မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းသည်ထူးခြားသောအင်္ဂါရပ်များစွာဖြင့်တင်ထားသည်။ ထည့်သွင်းထားသော keylogger နှင့်ကိုယ်ပျောက်နည်းပညာသည်အခြားသူလျှိုအသုံးချမှုများနှင့်ကွဲပြားခြားနားစေသည်။
Cocospy သည်ပစ်မှတ်ကိရိယာတွင်နေရာနှင့်ဘက်ထရီလျော့နည်းစေပြီးတိတ်ဆိတ်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းကိုကလစ်တစ်ချက်တည်းဖြင့်အဝေးမှဖျက်နိုင်သည်။ အရေးအကြီးဆုံးမှာဖောက်သည်များ၏ပံ့ပိုးမှုသည်အလွန်ကျွမ်းကျင်သည်။
လိမ်လည်သူတိုင်းသည်သူ၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုမသိဘဲအမြဲတမ်းအချက်ပြသည်။ ဤဆိုင်းဘုတ်များနှင့်လှုပ်ရှားမှုများကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်တစ်စုံတစ်ယောက်အားလိမ်လည်လှည့်စားနေသည်ဟုသင်သံသယရှိသင့်သည်ကိုသင်အလွယ်တကူဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ နိမိတ်လက္ခဏာများကိုနားလည်ရန်အတွက်အကြံပေးချက်များကိုသိရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
ဤနေရာတွင် cheat ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုနားလည်ရန်အတွက်အချက် ၅ ချက်ကိုဆွေးနွေးပါမည်။ သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွင်ထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူအပြောင်းအလဲများကိုသင်တွေ့ရှိပါကနိုးနိုးကြားကြားရှိပါ။
အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲသင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုလျစ်လျူရှုခြင်း / ရှောင်ခြင်းကိုသင်တွေ့ပါကတခါတရံသတိထားပါ ဒီတစ်ခါလည်းသူတို့ကသင့်ကိုသူတို့စိတ်မ ၀ င်စားကြောင်းပြသလိမ့်မည်။
လှည့်စားတဲ့လူအများစုကသူတို့ကိုယ်သူတို့ဖုန်းမှာအလုပ်များနေကြတယ်။ စိတ်ချရသောသူလျှို app တစ်ခုကို အသုံးပြု၍ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းမှတ်တမ်းများနှင့်အခြားဖုန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုစစ်ဆေးရန်အကြံပြုပါသည်။ Browser ရဲ့သမိုင်းကသင့်ရှေ့မှာလျှို့ဝှက်ချက်များစွာကိုဖွင့်ပြပြီးသဲလွန်စတွေကိုသင်တွေ့လိမ့်မယ်။
ဒါဟာ cheaters အများစုဟာသူတို့ရဲ့အလုပ်အားဖြင့်သူတို့၏လိမ်လည်မှုလှုပ်ရှားမှုများဖုံးအုပ်ကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည် သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သည်ရုံးသို့ရုတ်တရက်စတင်လည်ပတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ထူးဆန်းသည့်အချိန်တွင်စတင်အလုပ်လုပ်ခြင်းရှိမရှိကြည့်ရှုရန်ကြိုးစားပါ။
သူတို့အိမ်ပြန်လာသည့်အခါ "အစည်းအဝေးတွင်ညပ်နေခြင်းသို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်ခြင်း" စသည့်သံသယဖြစ်ဖွယ်အကြောင်းပြချက်များအစပျိုးခြင်းရှိမရှိအနီးကပ်အာရုံစိုက်ပါ။ သူတို့ကအမှန်တရားကိုပြောနေတာဖြစ်ပေမယ့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောသူလျှို app ၏အကူအညီဖြင့်သူတို့တည်နေရာကိုခြေရာခံနိုင်မှာသေချာသည်။
သင်လိုအပ်သည့်ရလဒ်များကိုသင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဤလျှောက်လွှာကို အသုံးပြု၍ တည်နေရာသာမကသင်၏လိမ်လည်လှည့်လုပ်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုပါစစ်ဆေးနိုင်သည်။
သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများအားလုံးကိုဂရုပြုပါ။ ပို့စ်များနှင့်မီဒီယာဖိုင်များအားလုံးကိုဂရုတစိုက်ကြည့်ရှု။ အကဲဖြတ်ပါ။ အခု Facebook, Snapchat, Instagram တို့လိုလူမှုကွန်ရက်တွေကနေတစ်ဆင့်လှည့်စားခံရတာအရမ်းများနေပြီ။
အမာခံလိမ်လည်သူများသည်သူတို့၏လူမှုမီဒီယာအကောင့်များသို့သီးသန့် mode မှတဆင့် ဝင်ရောက်၍ စကားပြောပြီးနောက်ပရောဂျက်များကိုဖျက်ပြီး၊ သူတို့၏လိမ်လည်လှည့်စားမှုသက်သေအထောက်အထားများကိုဖျက်စီးရန်ဖိုင်များကိုဖျက်ပစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စမျိုးတွင်မည်သူမျှသူတို့၏လှုပ်ရှားမှုများကိုလူသိရှင်ကြားမမြင်နိုင်ပါ။
ထို့ကြောင့်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏လူမှုမီဒီယာအကောင့်များအားလုံးကိုဆက်လက်စစ်ဆေးရန်အကြံပြုလိုသည်။ လုံခြုံပြီးအကာအကွယ်ပေးထားသော spy app ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကိုဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ပုဂ္ဂလိကစနစ်ဖြင့်ပြုလုပ်သည်ကိုစောင့်ကြည့်နိုင်သည်။
ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းသောအခါသူတို့၏ဘုံအဖြေများမှာ“ ၎င်းသည်တရားဝင်ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုဖြစ်သည်”၊ “ ၎င်းသည် spam ခေါ်ဆိုမှု” သို့မဟုတ်“ မှားယွင်းသောနံပါတ်တစ်ခု” ဖြစ်သည်။
ခေါ်ဆိုသူ၏ဝိသေသလက္ခဏာကိုစစ်ဆေးရန်သူလျှို app ၏အဆင့်မြင့်ခေါ်ဆိုမှုမော်နီတာအင်္ဂါရပ်ကိုအသုံးပြုပါ။ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမော်နီတာအတော်များများသည်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအသံဖမ်းစက်များတပ်ဆင်ထားပြီးနှစ်များတစ်လျှောက်ဖုန်းတွင်ဘာစကားပြောဆိုမှုများကိုတွေ့ရှိကြောင်းသင်သိရန်ကူညီနိုင်သည်။
ခရက်ဒစ်ကဒ်ဖြင့်ငွေပေးချေခြင်းသည်အခြားငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများတွင်များသောအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ခရက်ဒစ်ကဒ်ထုတ်ပြန်ချက်သည်မည်သူမဆိုဖော်ထုတ်နိုင်သည်။ သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သည်မည်သည့်နေရာတွင်ငွေသုံးစွဲသည်ကိုအလွယ်တကူစစ်ဆေးနိုင်သည်။
သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကသင်၏အသိပညာမပါဘဲသီးခြားခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုအသုံးပြုပါကသူလျှိုအက်ပ်ကို သုံး၍ ခရက်ဒစ်ကဒ်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောဆဲလ်ဖုန်းတွင်ပါသောမက်ဆေ့ခ်ျများကိုရယူရန်ကြိုးစားပါ။
လိမ်လည်သူများကိုသင်မည်သို့ဖမ်းမိမည်နည်း။ Minspy ကဲ့သို့သောသင့်တော်သောသူလျှို app တစ်ခုကို အသုံးပြု၍ သင်အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤအက်ပ်သည်သင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းသမိုင်း၊ ဘရောင်ဇာသမိုင်း၊ လူမှုမီဒီယာအသုံးချပရိုဂရမ်များနှင့်အခြားအချက်အလက်များကိုအလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်သည်။
ဒီအက်ပလီကေးရှင်းရဲ့အကောင်းဆုံးအရာကသူဟာကိုယ်ပျောက်နည်းပညာကိုသုံးထားလို့ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာပစ်မှတ်အသုံးပြုသူသည်စောင့်ကြည့်ခြင်းနည်းပညာ၏တည်ရှိမှုကိုရှာဖွေရန်မဖြစ်နိုင်သလောက်ဖြစ်သည်။ rooting သို့မဟုတ် jailbreaking မရှိပါ။
ယခင်ဆောင်းပါးအကောင်းဆုံး WhatsApp ကိုဟက်ကာစနစ်များ
နောက်ဆောင်းပါးစစ်တမ်းမရှိဘဲနှင့်လူ့အတည်ပြုချက်မပါဘဲ Instagram အကောင့်များနှင့်စကားဝှက်များကိုဘယ်လို Hack မလဲ